သင်၏ Instagram ID ကဒ်ပြားကိုယခုလူမှုကွန်ယက်တွင်အသစ်ဖွင့်ပါ။ | Androidsis
Manuel Ramirez | | Android application များ, NOTICIAS, လဲ tutorial
သေချာတာပေါ့သင်နှင့်အတူရှိသောကြောင့်, QR codes တွေကိုငါသိ၏ အသစ်က Instagram ကိုကဒ်ပြား၊ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယိုလူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တွင်ဘာအသစ်များရှိပါသလဲ။ မိတ်ဆွေတစ် ဦး သို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ကသင့်ကိုလိုက်နာရန်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ သင်၏ကဒ်ကိုဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြသခြင်းသို့မဟုတ်စာရွက်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်မည်သူမဆိုသင်၏ပရိုဖိုင်ကိုရှာဖွေရန်၎င်းအားစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုသည်။
တစ် ဦး ကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့လမ်း အခြားသူများကိုသင်နောက်သို့နိုင်ပါတယ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်စေမည်သည့်အကောင့်အမျိုးအစားကိုမဆိုလူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည် မှလွဲ၍ အပြင်။ ID ကဒ်ဖြင့်စီးပွားရေးကဒ်တစ်ခုတောင်သင်ဖန်တီးနိုင်ပြီး၎င်းတွင်လက်ရှိသူ၊ Instagram နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးချက်ချင်းလိုက်နာနိုင်သည်။
1 Instagram ID ကဒ်ကဘာလဲ။
2 Instagram ID ကဒ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
3 သင်၏ Instagram ID ကဒ်ကိုမည်သို့ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရမည်နည်း
Instagram ID ကဒ်ကဘာလဲ။
Instagram ကရှည်လျားသောလမ်း Facebook ကိုရပ်တန့်ဖို့တောင်အကြောင်းမှာ၎င်းသည်လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်လိုက်များထည့်ရန်နည်းလမ်းသစ်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ အမည်၊ QR codes လိုမျိုး, အသုံးပြုသူသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များချက်ချင်းပေါ်လာစေရန်သူတို့၏ဖုန်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ကဒ်ကိုစကင်ဖတ်နိုင်လိမ့်မည်။
ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Instagram ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်မှရှာဖွေရန်လိုအပ်ခြင်းကိုသိမ်းဆည်းထားသည် ထိုထူးဆန်းသောအမည်များကိုရိုက်နှိပ်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူမှုရေးကွန်ရက်ရဲ့အကောင့်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားထည့်ထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနေရာကိုရှာဖွေဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်။ ပွဲကျင်းပသည့်အခါမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်နိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့ကကလေးများအတွက်မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုတွင်အမှတ်အသားတစ်ခုသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်တစ်ခု၏နိမိတ်တွင်အမှတ်အသားတစ်ခုသို့မဟုတ်အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားသောနေရာကဒ်ပြားတစ်ခုပေါ်လာသည်။
Instagram ID ကဒ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ
ဒီဟာကတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ အဲဒါကိုအရင်ဖန်တီးပြီးသားဖြစ်လို့ပါ။ အခြားအရာတစ်ခုခုနှင့်လုပ်လိုလျှင်၎င်းကိုသာပြုပြင်ရမည်။ ငါတို့ဥပမာလုပ်နိုင်တယ် မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖုံးအုပ်ထားသော Emojis ကိုပြောင်းပါနောက်ခံဖြစ်ရန်အရောင် gradient ကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်အရာအားလုံး ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါသည့်မျက်မှန်ကိုသရုပ်ဖော်ပါ။ ငါတို့အရင်ပြောခဲ့သလိုပဲ၊
သွားကြရအောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Instagram ကိုပရိုဖိုင်းကို ညာဘက်အောက်ခြေရှိ user tab မှ။
ငါတို့ရှိသည် ၃ ဘားအိုင်ကွန် အထက်ညာဘက်အစိတ်အပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်အလျားလိုက်။ ကျနော်တို့ကနှိပ်။
ငါတို့ရှိလိမ့်မည် အသုံးပြုသူအမည်နှင့်အတူ ID ကဒ် နှင့် Instagram လိုဂို။
ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်သုံးခုကိုပြောင်းရန်“ Emoticons” ကိုနှိပ်ပါ။ Emojis, selfie နှင့်အရောင်.
သင်၏ Instagram ID ကဒ်ကိုမည်သို့ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရမည်နည်း
ငါတို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ emojis, selfie နှင့် color ။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် နှုတ်ခမ်းမွှေးနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်သူတို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါအရောင်တစ်မျိုး၏ gradient ကိုထားပါသို့မဟုတ်ကဒ်ကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်နောက်ခံ Emojis ကိုပြောင်းပါ။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် emojis option ကိုရွေးချယ်ပါက၊ နောက်ခံပုံပေါ်သောသူတို့ကိုပြောင်းလဲပစ် အသုံးပြုသူအမည်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်။
selfie: ၎င်းသည်အပြာရောင်မျက်မှန်များ၊ နှလုံးသားများ၊ နှုတ်ခမ်းမွှေးများ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများနှင့်အခြားအဝါရောင်မျက်မှန်များအကြားပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အားရွေးချယ်ခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ရန် selfie တစ်ခုကိုသာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်နောက်ခံတစ်ခုလုံးကိုကျော်ယူပြီး emojis ၌ရှိသကဲ့သို့ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အရောင်: ကျွန်ုပ်တို့သည် gradient ၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မတူကွဲပြားသောပေါင်းစပ်မှုများပေါ်ပေါက်နိုင်ရန် username ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ဆုံးသင်လုပ်နိုင်သည် အပေါ်ညာဘက်ရှိအိုင်ကွန်မှသင်၏ကဒ်ကိုမျှဝေပါ။ သင်၎င်းကိုနှိပ်သောအခါမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်တွင်မဆိုမျှဝေနိုင်အောင်ရွေးချယ်စရာများပေါ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်မည်သူမဆိုသင့်ကိုလိုက်နာလိမ့်မည်။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည် "Scan ID ကဒ်".
ဤနည်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် သင်၏ ID ကဒ်ကို Instagram ပေါ်တွင်ရှာဖွေပြီးဖန်တီးပါ။ မည်သူမဆို Instagram ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်ရန်နှင့်၎င်းတို့၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်မည်သည့်အရာကိုမဆိုရိုက်ရန်မလိုပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Instagram ID ကဒ်တစ်ခုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ - လူမှုကွန်ယက်မှာဘာတွေအသစ်တွေရလာသလဲ၊ သင့်ကိုလွယ်ကူစွာလိုက်နာပါ
OnePlus စီအီးအိုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသသည် - အသံပေါက်ကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ခက်ခဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်သည်